सा’वधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज भुलेर पनि नखानुहाेला ! नत्र पछुताउनु पर्ला ! (भिडियाेमा हेर्नुस्) – Khoj Dainik
March 21, 2021 adminLeaveaComment on सा’वधान ! चिया पिएपछि यी ३ चीज भुलेर पनि नखानुहाेला ! नत्र पछुताउनु पर्ला ! (भिडियाेमा हेर्नुस्)
क) अधिकांश नेपालीले बिहान चिया पिउछन् । के बिहान खाली पेटमा चिया पिउनु राम्रो बानी हो ? बिभिन्न अनुसन्धानले खाली पेटमा चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई धेरै हा`नी हुनसक्ने देखाएका छन् । ख) चियामा कैफिन र टैनिन पाइन्छ जसले शरीरलाई उर्जा दिन्छ । चियामा दूध मिसाउदा चियामा पाइने ए`ण्टिअक्सिडेन्ट न“ष्ट हुन्छ ।
ग) ब्रिटिस मेडिकल जर्नलमा छापिएको अध्ययनअनुसार तातो चिया पिउने मानिसमा खाना खाने नली तथा घाँटीको क्यान्सर हुने सम्भावना आठ गुणाबढी हुन्छ । घ)चिया पिउनुका फाइदा नभएका होइनन् । तर खाली पेटमा पिउने, धेरै पिउने र धेरै गुलियो चिया पिउदा स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । दूध चिया भन्दा कालो चियाले फाइदा गर्छ तर कालो चिया पनि धेरै पिउनु हुदैन ।
ङ) खाली पेटमा दूध चिया पिउदा थकान बढ्ने, ए`सिडिटी बढ्ने हुन्छ । यसले पेटको अल्सर पनि हुनसक्छ । दिनमा ५ कप भन्दा बढी चिया पिउने मानिसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर हुनसक्ने बिभिन्न अध्ययनहरुले दखाएका छन् । च) दूध चियाले मोटोपन बढाउछ । चियाले मधुमेहका बिरामीमा चिनिको नियन्त्रण बिग्रन सक्छ । दूध चियाको अर्को नराम्रो पक्ष भनेको कोलेस्टेरोल हो ।
सपना रोका मगर रातारात हस्पिटल भर्ना, अहिलेको अ’वस्था एस्तो…
पढाइ छाेडेर विद्यार्थीहरु जंगल जाने र याै’न।मा रमाउने, अभिभावक चिन्तित (हेर्नुहोस् भिडियो सहित)